Lalana mifehy ny mpanohitra :: Miditra an-tsehatra koa ireo antoko ivelan’ny Antenimierampirenena • AoRaha
Lalana mifehy ny mpanohitra Miditra an-tsehatra koa ireo antoko ivelan’ny Antenimierampirenena
Mitady ny anjara masoandrony ihany koa. Nanatitra tolo-kevitra momba ny tolo-dalàna mifehy ny antoko mpanohitra sy ny fanoherana, teny Tsimbazaza, ny alatsinainy teo, ny antoko politika miisa dimy. Milaza izy ireo fa mahafeno ny fepetra voalazan’ny andininy faharoa amin’ny io lalàna io, sady efa nametraka antontan-taratasy teny amin’ny minisiteran’ny Atitany sy ny fitsinjaram-pahefana ihany koa. Miitatra ity ady toerana ho mpanohitra eto amin’ny firenena ity, ankehitriny.
«Tsy ny mpitondra no hamaritra ny lalàna mifehy anay mpanohitra. Angatahinay ny hisian’ny fanoherana manana ny mahaizy azy, manana kolontsaina mazava ary tsy ho entin’ny rivotra mitsoka », hoy Ravololomanana Lalatiana, filohan’ny Manda ho an’ny firaisam-pirenena, iray amin’ireo antoko milaza ho mpanohitra araka ny lalàna.
Misora tena sa … ?
Anisan’ny miteraka adihevitra ny mikasika ny tsanganan’ny filohan’ny mpanohitra. Etsy an-daniny, ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM) no manisika mafy fa tokony ho Ravalomanana Marc no hitarika an’io fanoherana eto amin’ny firenena io. Toa nandamòka ny sarintsarim-pamoriana an’ireo antoko na fikambanana na vondrona politika nataon’izy ireo, tetsy Anosy, tamin’ny faran’ny herinandro lasa teo. Nieloelo teny an-toerana ny fikasana hisora-tena ho filohan’ny mpanohitra.
Mitaky ny fanoherana miainga avy ao amin’ny Antenimierampirenena kosa ny tolo-dalàna hodinihina, amin’izao fotoana izao, etsy Tsimbazaza. Tonga indray, tamin’ny fiandohan’ity herinandro ity, ireto antoko tsy manana solombavambahoaka amin’ny fitakiana ny handraisana anjara amin’ny fanendrena ny filohan’ny fanoherana.
« Ny fandraisana fahefana amin’ny alalan’ny fifidianana no antom-pisian’ny antoko politika», hoy avy hatrany ny Komity mpanara-maso ny fifidianana sady manabe olom-pirenena na ny KMF/CNOE. Efa nanambara rahateo ny filohan’ny Antenimierandoholona fa hampiantso an’ireo antoko politika hiara-handinika an’ilay tolo-dalàna. Andrasana ny mety ho vokany mba tsy hirava maina toy ilay fikasana hanangana vovonana, toy ilay tamin’ny sabotsy lasa teo, teny Anosy.